जापानी नागरिक र विदेशी नागरिक बीच विवाहको लागि प्रक्रिया के छ?
जापानमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकहरू बीच विवाहको लागि प्रक्रिया के छ?
म हाल जापानमा गैर-कानूनी रूपमा बसिरहेको छु। के मैले अहिले डेट गरिरहेको जापानी नागरिकलाई विवाह गर्न सक्छु?
म विदेशी नागरिक हुँ जसको तीन वर्षअघि जापानी व्यक्तिसँग विवाह भएको थियो र जापानमा बस्छु। मैले सम्बन्ध विच्छेद कसरी गर्न सक्छु?
हामी जापानमा बसोबास गरिरहेका समान राष्ट्रियताका विवाहित जोडी हौं। जापानी नागरिक र विदेशी नागरिक बीच विवाहको लागि प्रक्रिया के छ?
मैले मेरो जापानी पति/पत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरें। मैले मेरो निवासको स्थितिलाई “जापानी नागरिकको पति/पत्नी वा बच्चा” बाट परिवर्तन गर्नुपर्छ? जापानी नागरिक र विदेशी नागरिक बीच विवाहको लागि प्रक्रिया के छ?
यस मामिलामा, तपाईंले जापानी विवाह प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ।
विवाहको सूचना (20 वर्ष वा माथिको उमेर भएका दुई साक्षीहरूद्वारा हस्ताक्षर र छाप लगाइएको)
जापानी पति/पत्नीको पारिवारिक दर्ता
जापानी अनुवादका साथ विदेशी पति/पत्नीको विवाहको गैर-अवरोधको प्रमाणपत्र
विदेशी पति/पत्नीको राष्ट्रियताको प्रमाण (राहदानी, एलियन दर्ता रेकर्डमा मामिलाहरूको प्रमाणपत्र, आदि)
विवाहमा गैर-अवरोधको प्रमाणपत्र प्राय जसो जापानमा विदेशी पति/पत्नीको दूतावासद्वारा जारी गरिन्छ तर त्यहाँ केही अपवादहरू छन्। विवाहमा गैर-अवरोधको प्रमाणपत्र प्राय जसो जापानमा विदेशी पति/पत्नीको दूतावासद्वारा जारी गरिन्छ तर त्यहाँ केही अपवादहरू छन्।
विदेशी भाषामा भएका कागजातहरू अनुवादकको नाम सहित अनुवादका साथमा उपलब्ध गराउनुपर्छ, ।
तपाईंले माथिका कागजातहरू जापानी पति/पत्नीको दर्ता गरिएको अधिवास वा निवास स्थानको नगरपालिका कार्यालय वा विदेशी पति/पत्नीको निवासको स्थानमा पेश गर्न आवश्यक छ। थप जानकारीको लागि, कृपया आफ्नो नगरपालिका कार्यालयको सम्पर्क गर्नुहोस्।
तपाईंलाईदूतावास वा जापानमा भएको विदेशी पति/पत्नीको देशको वाणिज्य दूतावासमा विवाह रिपोर्ट गर्नुपर्छ।
यस्ता मामिलाहरूमा, तपाईंले जापानी विवाह प्रक्रिया पालना गरी आफ्नो नगरपालिकाको कार्यालयमा आफ्नो विवाह दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ।
जापानी अनुवादका साथ दुवै पति/पत्नीको विवाहको गैर-अवरोधको प्रमाणपत्र
दुवै पति/पत्नीको राष्ट्रियताको प्रमाण (राहदानी, एलियन दर्ता रेकर्डमा मामिलाहरूको प्रमाणपत्र, आदि)
विवाहमा गैर-अवरोधको प्रमाणपत्र प्राय जसो जापानमा विदेशी पति/पत्नीको दूतावासद्वारा जारी गरिन्छ तर त्यहाँ केही अपवादहरू छन्।
जापानमा दर्ता गरिएको विवाहको मान्यता राष्ट्र अनुसार फरक हुन्छ, त्यसैले जापानमा आफ्नो देशको दूतावाससँग पुष्टि गर्नुहोस्।
【विवाह र सम्बन्ध विच्छेदको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था】विवाह र सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी कानूनहरू देश अनुसार फरक हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय जोडीहरूका लागि अधिनियन्त्रण गर्ने कानूनहरू निम्नानुसार छन्।
दुवै पति/पत्नी एउटै देशका हुन् भने → सोही देशका कानूनहरू
पति/पत्नीका राष्ट्रियता फरक छन् तर एउटै देशमा बस्छन् भने → निवासको राष्ट्रका कानूनहरू
पति/पत्नीका राष्ट्रियता फरक छन् र फरक देशमा बस्छन् भने → जोडीसँग सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध भएको देशका कानूनहरू
पति/पत्नी जापानी राष्ट्रियताका हुन् र जोडी जापानमा बस्छन् भने, जापानी कानूनले प्राथमिकता लिनेछ।
तपाईंले विवाहको लागि आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो निवासको स्थितिलाई ख्यालमा नराखि विवाह गर्न सक्नुहुन्छ। विवाहको लागि निवासको स्थिति हुनु आवश्यकता होइन। यद्यपि, तपाईंले सबै आवश्यक कागजातहरू तयार पार्नुपर्छ। विवाहित भएको तथ्यले तपाईंलाई स्वचालित रूपमा निवासको स्थिति दिँदैन। स्थिर विवाहित जीवन बाँच्नको लागि तपाईंले आफ्नो अधिक बसाइ समाधान गर्न आवश्यक छ। कृपया नोट गर्नुहोस् कि तपाईंको विवाह भएता पनि तपाईंलाई जापानमा रहन अनुमति दिइनेछैन।
जापानमा, तपाईंले (1) आपसी सम्झौताद्वारा सम्बन्ध विच्छेद गर्न, (2) मध्यस्थताद्वारा सम्बन्ध विच्छेद गर्न वा (3) अदालतको न्यायद्वारा सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय विवाहको मामिलामा, अधिनियन्त्रण गर्ने कानूनहरूले परस्पर सम्झौताद्वारा सम्बन्ध विच्छेद गर्न अनुमति नदिन सक्छ।
विधानहरूले प्रतिज्ञा गर्छ कि पति वा पत्नी मध्ये कुनै एक जना जापानमा स्थायी ठेगाना भएको जापानी राष्ट्रिय हो भने जापानी कानूनहरू लागू हुन्छ भनी प्रतिज्ञा गर्छ (चलनमा, पारिवारिक दर्तामा निवासको रूपमा दर्ता हुन पर्याप्त छ)।
त्यहाँ भएको जापानी जन संहिता माथिको मामिलामा लागू हुन्छ र तपाईंले आफ्नो निवासको स्थान वा दर्ता गरिएको अधिवासको नगरपालिका कार्यालयमा निम्न कागजातहरू पेश गरी परस्पर सम्झौताद्वारा सम्बन्ध विच्छेद प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
सम्बन्ध विच्छेदको सूचना (20 वर्ष वा माथिको उमेर भएका दुई साक्षीहरूद्वारा हस्ताक्षर र छाप लगाइएको)
माथिका कागजातहरू (राहदानी, आदि) पेश गर्ने व्यक्तिको आइडी
अदालतको निर्णयद्वारा सम्बन्ध विच्छेद गर्नको लागि, तपाईंले पहिले पारिवारिक अदालतमा मध्यस्थताको लागि फाइल गर्न आवश्यक छ। मध्यस्थता निष्कर्ष गरियो भने सम्बन्ध विच्छेद सम्पन्न भयो।
दुवै पति वा पत्नी विदेश नागरिकहरू हुन् भने, तपाईंले आफ्नो देशको कानून अनुसार सम्बन्ध विच्छेद गर्न आवश्यक छ। कृपया जापानमा आफ्नो देशको दूतावास वा वाणिज्य दूतावासलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
तपाईंको देशको कानूनले परस्पर सम्झौताद्वारा सम्बन्ध विच्छेद गर्न अनुमति दिन्छ भने, तपाईंले जापानमा परस्पर सम्झौताद्वारा सम्बन्ध विच्छेदको सूचना फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। जापानी नागरिक र विदेशी नागरिक बीच विवाहको लागि प्रक्रिया के छ?
तपाईंको विवाह प्रमाणित गर्ने कागजात(हरू)
जापानी कानून अन्तर्गत परस्पर सम्झौताद्वारा सम्बन्ध विच्छेद गर्न अनुमति दिइएको छ भनी प्रमाण
मैले मेरो जापानी पति/पत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरें। मैले मेरो निवासको स्थितिलाई “जापानी नागरिकको पति/पत्नी वा बच्चा” बाट परिवर्तन गर्नुपर्छ? मैले मेरो बसाइको अवधि कसरी नवीकरण गर्न सक्छु?
तपाईंको सम्बन्ध विच्छेद भएता पनि, तपाईं आफ्नो बसाइको अवधिको अन्त्यसम्म जापानमा बस्न सक्नुहुन्छ।
यद्यपि, तपाईंले जापानी नागरिकको पति/पत्नी वा बच्चाको रूपमा आफ्नो निवासको स्थिति नवीकरण गर्न सक्नुहुन्न। तपाईं जापानमा बस्न जारी राख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो क्षेत्रको क्षेत्रीय आप्रवास विभागमा निवासको स्थिति परिवर्तन गर्नको लागि (उदाहरणको लागि लामो-अवधि निवासीमा) आवेदन दिन आवश्यक छ।
तपाईं जापानमा धेरै वर्षको लागि बसोबास गर्नुभएको छ वा तपाईंले जापानी बच्चा हर्काउँदै हुनुहुन्छ भने यस प्रकारको निवासको स्थितिमा परिवर्तन प्रमाणित गर्न सकिन्छ।
थप जानकारीको लागि, कृपया नागोया क्षेत्रीय आप्रवास विभाग वा आप्रवास जानकारी केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्।